क्यामरामा कैद बिएसीसीको दशै साझ | Prakass In Blogging
बि ए सि सिको आयोजनामा क्यालिफोर्निया राज्य स्थित ओक्ल्यान्डमा दशै साझ सफलताका साथ सम्पन्न भयो। $१५ प्रबेश शुल्क रहेको उक्त कार्यक्रममा समग्र रुपमा हेर्ने हो भने भुटानिको उपस्थिती कम नै थियो र अधिकाङ्श दर्शकहरु नेपालीहरु थिए। बिशेष अतिथीका रुपमा पाल्नु भएका रोशन गुरुङ र भुटानि युवायुवातीहरुको आफ्नै क्लब “क्षितिज”का केही स्थानिया भुटानि कलकारहरुले आफ्नो गीत र न्रित्य प्रस्तुत गरेका थिए। । यस कार्यक्रम बारे हामीले यो साईटमा पहिले नै एउटा समाचार प्रकाशन गरेका थियौ र हाम्रा पाठकहरुको मागलाई ध्यानमा राख्दै हामीले यस् पाली भुटानयुएसएका सदस्य प्रकाश पौडेलको क्यामरामा कैद भएका केही तस्बिरहरु यहाँ राखेका छौ। सात साढेबाट सुरु भएको कार्यक्रम २ बजे सिधिएको थियो। पुरै कार्यक्रमलाई एउटा सानो क्यामरा भित्र राख्न सकिन्दैन तर हामीले त्यो सत्यतालाई मिचेर भए पनि कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा तस्बिर मार्फत यस साईटमा राख्ने प्रयास गरेका छौ।
रकर टि,एक अमेरिकी नागरिकले हिन्दी गीत प्रस्तुत गरेर सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई मनोरन्जन र हासो दिनु भएको थियो। दर्शकहरुलाई वहाँको उपहार “ना हे पाना….ना खोना भि हे….वहाँले आफ्नो एउटा एल्बम पनि निकाली सक्नु भएको छ। वहाँको एल्बम खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई संपर्क गर्नु होला।
आफ्नो आकर्शक न्रित्य प्रस्तुत गर्न आतुर एक पुनर्स्थापित भुटानि कलाकार। कार्यक्रममा भुटानिहरुको उपस्थिती केही काम नै थियो तर पनि उपस्थित भुटानि अबिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुको न्रित्यहरुबाट खुबै मनोरन्जन लिए।
उत्तम गुरुङ, स्थानिय क्षितीज क्लबका सदस्य आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्दै। वहाँले पुरानो नेपाली गीत जती माया लाए पनि…..जती कसम खाए पनि …. प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
यस्ता आकर्शक न्रित्यहरुले कार्यक्रमलाई अझ मनोरन्जनपूर्ण बनाएको थियो।
आकर्शक स्टेजमा आकर्शक न्रित्यहरु। भुटानिहरुमा अपार कला छ भन्ने सत्यलाई भुटानिहरुले प्रमाणित गरेका थिए।
र यो मिलनको कार्यक्रम पो हो कि! कार्यक्रममा भुटानीहरुको आफ्नै दोश्रो संस्था “बासको”का सदस्यहरु। कार्यक्रममा थोरै भुटानि र धेरै नेपालीहरुको उपस्थिती थियो, शायद कार्यक्रमको प्रबेश सुल्कले पो हो कि ? प्रबेश सुल्क $१५ थियो
पुनर्स्थापना कार्यक्रममा भुटानिहरुलाई सहयोग गर्दै आएको आइआरसीका स्वयमसेवक पिटरले आफ्नो नेपाली गीतले सबैलाई अच्चामित बनाउनु भएको थियो। वहाँले लोकप्रिया नेपाली गीत “कन्छीलाई घुमाउने काठमाडौं शहर ….गीत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
संगीतको धुनसँगै रमाइलो गरिरहेका भुटानि र अन्य दर्शकहरु। कार्यक्रममा डिजे पनि भएको थियो।
अन्त्यामा कार्यक्रमका प्रमुख आकर्शण रोशन गुरुङका साथमा भुटानिहरु। वहाँले आफ्न कर्णप्रिया गीतहरुबाट सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई नचाउनु भएको थियो।
फोटो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
« Democratisation in Bhutan all for show, exiled Bhutanese dissident says. शिबिरमा सुरक्षा कडा बनाइयो,गोल्धापका एक शरणार्थीको मृत्यु »